ह्याप्पी ‘रोज डे’ याेङ्ग म्यान ! — Imandarmedia.com
बाघले खरायो र हरिणलाई हेर्दै नहेरी अगाडि बढेको देखेर मलाई अचम्म लागिरहेको थियो, अलि अप्ठ्यारो मान्दै सोधिहाले । तिमीले खरायो र हरिणलाई चाहि किन नखाएको नी ? उसले सजिलै जवाफ दियो – म आजभोली मासु खादिन नी ! उसको जवाफ सुनेर म झन् दंग परे । मासु खाँदिन रे किन ? मैले उसको अगाडि फेरी प्रश्न तेर्स्याए । उसले बडो रोचक तरिकाले उत्तर दियो- ‘माघको महिना क्या !’ अरे वा ! उसको उत्तर सुनेर मलाई पनि गजब लाग्यो ।
म कुदेर गए र बगौँचा हेरे चारैतिर, यो फूलहरूको बगैँचा मात्र होइन रहेछ, खुसीहरूको बगैँचा रहेछ यो त । यहा फूलसॅगै खुसीहरू पनि फुल्दा रहेछन कहिले नओइलाउने गरेर । त्यो बगैचाँमा मन्त्रमुग्ध भए म स्वर्गीय अनुभूतीका साथ ! लाग्यो स्वर्गको एउटा टुक्रा खसेछ यता पनि । अनि बाघहरू यस्ता ठाउॅमा बस्दारहेछन र त खुसी रहेछन !म पनि खुसी भए । म अनेकथरी फुलको मजा लिरहेको बेला आफ्नै धुनमा मस्त रहेको बाघ यत्तिकैमा हस्याङफस्याङ गर्दै बाघ म तिर आयो । मेरो अगाडि आएको बाघलाई देखेर म पनि टक्क उभिए ! बाघले मुखमा च्यापेर ल्याएको सुन्दर गुलाब मेरो हातमा दिएर मुस्कुराउदै भन्यो-“ह्याप्पी ‘रोज डे’ याेङ्ग म्यान !
म पनि हिस्स हाँसे र गुलाव लिदै भने – थ्याङ्स ! भ्यालेन्टाइनस डेसम्म यहि ठाँउ मा कुर्ने छु म….
साहित्य सँग सम्बन्धित
पन्ध्र वर्षसम्म च्यात्न नसकेको उनको तस्बिर, जव नावालक छोराले पर्सबाट झिकेर…
परदेशीको कथा श्रीमती, गाउँमा अर्कैको माया” मोहमा” लिदै,
मनछुने कथा“ असल श्रीमती” महिलाले एकचोटी अबस्य पढौँ “अनि पुरुषले शेयर गरौँ
भन तिम्रो विर्यको मुल्य कति हो ? म चुक्ता गर्न चाहन्छु